5 ဥရောပမှာတော့ခရီးသွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးလမ်းကြောင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့ခရီးသွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးလမ်းကြောင်း
မီးရထားခရီးသွားလာသြစတြီးယား, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာဂျာမဏီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေမယ့်ရက်အနည်းငယ်ဟုတ်မဟုတ် ဆိုင်ကယ်ဂီယာ ဒါပေမဲ့ဆဲသာယာလှပစက်ဘီးစီးလမ်းကြောင်းခံစား, သို့မဟုတ်ကန်တစ်ဦးထံမှမော်ကွန်း 1,800km စီးနင်း ရောမမြို့, ကျွန်တော်တို့၏5ဥရောပမှာတော့ခရီးသွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးလမ်းကြောင်း သငျသညျလာအောင်နှိုးဆွပါလိမ့်မယ်!
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်ပထမဦးဆုံး5အကောင်းဆုံးစက်ဘီးလမ်းကြောင်းဥရောပခုနှစ်တွင်ခရီးသွားစေရန်ဖြစ်ပါသည်: Passau, ဗီယင်နာရန်ဂျာမနီ
ဒါကတဖျောပွဆိုင်ကယ်ဂီယာတယောသမားအဘို့မဟုတ်ပါဘူး. အနည်းငယ်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရဘို့, ဒါပေမယ့်မရအတော်လေး Tour de France စက်ဘီးစီးသူ, ဒါသင့်အတွက်ပါ!
တစ်ဦးကတစ်ဦးအပတ်ကပထမဦးဆုံးသံသရာလမ်းကြောင်းတွင်, ငါတို့သည်သင်တို့အကြံပြုချင်ပါတယ် ရထားဖမ်း Passau ဖို့ဂျာမန်နယ်စပ်ကျော်, လှပသောမြို့ဘယ်မှာမြစ်အင်း, ညုနှင့် Ils တွေ့ကြံ. Drasch မှာဿိကနေစက်ဘီးငှားရမ်း စက်ဘီးဆေးခန်း နှင့်ညုအနားမှာအသွားအလာအခမဲ့လမ်းကြောင်းတလျှောက်ကိုပိတ်ထားနင်း.
Esterbauer လမ်းညွှန်ထုတ်ဝေ ဒီဂန္လမ်းကြောင်းများအတွက်အင်္ဂလိပ်စာ: မြေပုံများအားအလွန်ကောင်းနေတယ် (သော်လည်းဖတ်နေနေတုန်းစီးကြိုးစားမနေပါနဲ့. ကြောင်းကြိုးစားခဲ့. တိုတောင်းသောပုံပြင်; ဒါကြောင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားအဆုံးသတ်) အဆိုပါမြေပုံများအားသင်အားငါပေးမည် နေရာထိုင်ခင်းစာရင်းများအဘို့အကြံပေးချက်များ ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုလမ်းမတစ်လျှောက်တွင်အကျိုးစီးပွားသောနေရာများ, Melk နှင့်သြစတြီးယားစပျစ်နွယ်ပင်နှင့်သစ်သီးကြီးထွားလာဒေသများကဲ့သို့အ. Fahrrad-Klinik တစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးအစီအစဉ်ရှိပါတယ် ဟော်တယ် သင်စက်ဘီးစွန့်ခွာရာအရပ်, ဗီယင်နာ၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်. နောက်ကျော Linz မှရထားဖမ်းခြင်းနှင့်နေအိမ်ပျံသန်းမတိုင်မီဗီယင်နာမြို့တွင်တစ်ရက်သို့မဟုတ်ဒါဖြုန်း.
2. သံသရာလမ်းကြောင်း: Francigena မှတဆင့်, အီတလီ
ယင်းပထဝီအနေအထားအရစိန်ခေါ်များအတွက်, ဒီကသင်၏အပေါ်ဖြစ်သင့်5ရန်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးလမ်းကြောင်း ဥရောပမှာခရီးသွား စာရင်း. ဤသည်အီတလီမှာအရှည်ဆုံး signposted သံသရာလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်! အဆိုပါမှတစ်ဆင့် Francigena နှင့်အတူနယ်စပ်တွင်မဟာစိန့်ဘားနတ် Pass ကိုကနေပြေး ဆွစ်ဇာလန် သို့ စိန့်ပေတရု၏ Basilica ရောမမွို့ရှိ.
တစ်ဦးဘုရားဖူးလမ်းကြောင်းပြီးတာနဲ့, ကတထောင်တစ်နှစ်ကျော်အရွယ်. အဆိုပါလမ်းကြောင်းမြင်းစီးမှတဆင့်ကြာ Tuscan ရှုခင်းများ နှင့်အတိတ် အလယ်ခေတ်မြို့ရွာ စန်း Gimignano နဲ့တူ. ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်အပိုကာလ၏စုံတွဲတစ်တွဲပေးမလား ဓာတ်ပုံကိုမှတ်တိုင်များ, အဆိုပါရံဖန်ရံခါ စပျစ်ရည်ကိုအရသာ, နှင့်ရောမသို့သင့်ရဲ့ခမ်းနားဝင်ပေါက်ခံစားရန်.
3. ညု Cycle Path ကို
သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် တစ်မိသားစုကိစ္စကသင်၏ခရီးစဉ်ကိုအောင် ထို့နောက် ညု Cycle Path ကို သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားဖြစ်ပါသည်! ဒါဟာဥရောပမှာအများဆုံးလူသိများနှင့်ကောင်းစွာခရီးထွက်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်ကတစ်ဦးရဲ့အံ့ဩစရာမရှိဖွင့်5ဥရောပ၌သွားလာအကောင်းဆုံးစက်ဘီးလမ်းကြောင်း.
ဒါဟာညုအောက်ပါအတိုင်း မြစ် ၎င်း၏အရင်းအမြစ်မှ ဂျာမနီ ပင်လယ်နက်ဖို့အားလုံးကိုလမ်း, ဒါပေမယ့်လမ်းကြောင်း၏လူကြိုက်အများဆုံးလမ်းပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည် 190 မိုင် (306 ကီလိုမီတာ) Passau နှင့်ဗီယင်နာ၏သာယာလှပဂျာမန်ရွာအကြားအဘို့ကို, သြစတြီးယား. အခမဲ့နှင့်အတော်လေးအပြားနီးပါးလုံးဝကားတစ်စီး, ဒီလမ်းကြောင်းကို-ရာမဆိုအသက်အရွယ်နှင့်စွမ်းရည်၏စက်ဘီးစီးဘို့ပြီးပြည့်စုံသော The-ဖြစ်ပါတယ်စီးတာတလျှောက်လုံးဂျာမနီနဲ့သြစတြီးယားတို့အကြားနယ်စပ် crisscrosses.
ဘာလင် Dresden မှရထား
ငါt အဖြစ်ထွက်ရပ့်တဦးတည်းသံသရာလမ်းကြောင်းစာရင်းပြုစုရန်အလွန်ခက်ခဲမယ့် ဟော်လန်အတွက်အကောင်းဆုံး. တကယ်တော့, ကျွန်တော်တို့၏5ဥရောပစာရင်းထဲတွင်သွားလာအကောင်းဆုံးစက်ဘီးလမ်းကြောင်းပဲဟော်လန်လမ်းကြောင်းထားရှိရေးနိုင်! ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကူးစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံဖြစ်ပါသည် အခြေခံအဆောက်အဦများ သငျသညျနေရာတိုင်းမှာသင်သံသရာတစ်ဦးအားရစရာဘို့အတွက်နေ! ၏လမ်းဆုံကွန်ယက်ကိုအောက်ပါ signposted လမ်းကြောင်းများ, အဆိုပါတလျှောက်စီး 32,000 သံသရာလမ်းခရီး၏ကီလိုမီတာ joyously အကြားတိုတောင်းသောအကွာအဝေးနှင့်အတူပြားချပ်ချပ်များမှာ မှတ်သားလောက်နေရာများ.
သငျသညျငြိမ်းချမ်းစွာစူးစမ်းဖို့ရှာနေရှိမရှိ ကမ်းရိုးတန်းနှင့်တော်တော်လေးဆိပ်ကမ်း ဟော်လန်ရဲ့မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်ကမ်းခြေ၏ကျေးရွာပေါင်း, တိုင်းပြည်ရဲ့ရောင်စုံမီးသီးကြီးထွားလာလယ်ကွင်းသို့မဟုတ် အမ်စတာဒမ်၏တက်ကြွမြို့တော်တဝိုက်လမ်းကြောင်းများ, သင်တစ်ဦးသည်ဖြည်းဖြည်းအရှိန်အဟုန်မှာတက်ကြွစွာစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အကြီးအကြောင်းအရာအားလုံးကို embody ကြောင့်သံသရာလမ်းကြောင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
5. အဆိုပါ Cycle Dieppe မှစ. ပဲရစ်ရန်လမ်းကြောင်း (သို့မဟုတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့)
ဒါဟာအချို့ရှည်လျားသောအကွာအဝေးမကျမည်အကြောင်း (ငါ့အဘို့ခဲ့သည်! ဟားဟား!) ဒါပေမယ့် 127 Dieppe ကနေပဲရစ်မှမိုင်အဆင်းလှသောရက်အနည်းငယ် '' စက်ဘီးစီးထောက်ပံ့! အကျော်ကြားဆုံးသံသရာလမ်းကြောင်းရိပ်သာလမ်း Verte ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းအားဖြင့်ရှေ့ဆောင်ခဲ့ပြီး Donald Hirsch က.
နည်းနည်းပြင်သစ်ရွာတွေကနေတဆင့်လမ်းကြောင်း meander ၏အစောပိုင်းမိုင်, ကိုလှိမ့ Down နဲ့ဂျုံနှင့်ပြောင်းဖူး၏အတိတ်လယ်ကွင်းကျော်. သော်လည်းခရီးစဉ်အပေါ်သိပ်မကြာမီစပျစ်ရည်ကိုအရသာလုပ်ဖို့မကြိုးစား! အဆိုပါလမ်းများသော်လည်းတိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာ, နှင့်ပင်ပန်းစိတ်ဝင်စားဖို့စောင့်ရှောက်သော်လည်းမမှည့်အလုံအလောက်တောင်ကုန်းရှိပါတယ်. Donald ရဲ့ website မှာသံသရာဖော်ရွေနေရာထိုင်ခင်းမှလင့်များပါရှိသည်.
ပဲရစ်မြို့အနီးသင်ကဲ့သို့, အဆိုပါရိပ်သာလမ်း Verte မတူပဲ, ဒီလမ်းကြောင်းဟာအသွားအလာကိုရှောင်ကြဉ်ရန်တော်ဝင်အမဲလိုက်သစ်တောတွေတစ်စီးရီးအားဖြင့်သင်တို့ကြာ. ပြီးနောက် 120 ကျေးရွာပေါင်းမိုင်, လယ်ကွင်း, နှင့် အမဲသစ်တောများ, သငျသညျ Parc စိန့်တိမ်တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ. ဒါဟာဗာဆိုင်းပြီးနောက်သစ်တော၏ဧရိယာရဲ့, ယာဉ်အသွားအလာအခမဲ့, ရှည်လျားဖြောင့်, နှင့်အရပ်ရှည်ရှည်သစ်ပင်များအားဖြင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်. ထိုအခါ, သင်လမ်းတစ်ကြောကျခငျးဧရိယာမှထွက်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းတွေ့မြင်, စမ်းရေ, နှင့်ကျော်လွန်ပြီးတစ်ခုခု.
Donald ရဲ့လမ်းကြောင်းလက်ဝဲရန်သင့်အားကြာ, ဒါကြောင့်သင်ကလမ်းရဲ့အဆုံးမှာရဲ့အဘယ်အရာကိုမြင်ဘယ်တော့မှ. သို့သော်ထိုသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အပေါ်စက်ဘီးတန်ဖိုးရှိမယ့်. ချောက်ထဲအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ရှာတွေ့, လူအပေါင်းတို့၏နဲ့အတူ ပဲရစ်သင်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌ဆနျ့. ဒါဟာအမြင်ကနေအသက်ရှူသင်ချန်ထားမည်, မခေတ္တခဏ.
ပေါ်တွင်သင်၏နင်းရနှင့်တဦးရွေးချယ်ဖို့အဆင်သင့်5ဥရောပမှာတော့ခရီးသွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးလမ်းကြောင်း? ကြီးမားသော! ဤသူအပေါင်းတို့သည်သောအရပ်တို့ကိုမများ၏အကူအညီဖြင့်ရထားရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် တစ်ဦးကရထား Save ဒါပေါ့! ဒါကြောင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းစတင်စက်ဘီးစီးစတင်ရန်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပမှာတော့ခရီးသွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးလမ်းကြောင်း” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-best-cycling-trails-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း).
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ja နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / zh-CN ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#စက်ဘီးစီးခြင်း #ခွေနငျးခလုပျ စက်ဘီး bikefriendly familytrip roadtrip
မီးရထားခရီးသွားလာဗြိတိန်နိုင်ငံ, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, မီးရထားခရီးသွားလာဆွီဒင်, မီးရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, မီးရထားခရီးသွားလာဗြိတိန်, ဥရောပခရီးသွား
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာဗြိတိန်နိုင်ငံ, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာဂျာမဏီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ဥရောပခရီးသွား